[တရားဝင်] Minspy Phone Spy - အွန်လိုင်းဆဲလ်ဖုန်း Tracker အွန်လိုင်း
သင်သတ်မှတ်ထားသောဖုန်းတွင် <% this.business%> ကိုဖွင့်သင့်သည်။ သင်မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်ကိုမသိပါက ဤလမ်းညွှန် ကိုကိုးကားပါ
<% this.business%> ကိုဖုန်းပေါ်တွင်မည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုသင်မသိပါက ဤလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ
Jailbreak မပါဘဲ iPhone Spy
Minspy - ထိပ်တန်းဖုန်းနှင့် tablet စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
သူတို့မြင်တာကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ဘယ်လိုသိလဲသိလား။ Minspy သည်မျက်မှောက်ခေတ်စမတ်ကိရိယာများကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဝှက်ထားသောလွယ်ကူစွာသုံးနိုင်သောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုများ၊ တည်နေရာများ၊ အက်ပ်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုခြေရာခံပါ။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအလိုလိုသိပြီး browser ကိုအခြေခံသည်။
အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ Demo ကြည့်ပါ
Minspy သည်လွတ်လပ်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနီးအနားတွင်မရှိဘဲပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်သွားနေသည့်အချိန်၌ပင်သင့်လက်ပ်တော့၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်အပါအ ၀ င်မည်သည့်အင်တာနက်ဖွင့်စက်မှမဆိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအချက်အလက်များကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာခေတ်သစ် Android နဲ့ iOS စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့တက်ဘလက်တွေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ Minspy lightning-quick ကို support လုပ်တဲ့ platform မှာ install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် app သည်ကိုယ်ပျောက် mode ကိုအလုပ်လုပ်သည်။ မင်းဘယ်တော့မှထွက်ရှာမခံတော့ဘူး။
Root (သို့) Jailbreak မပါဘဲအသုံးပြုပါ
target device ကို root သို့မဟုတ် jailbreak လုပ်ရန်စိတ်ပူပါသလား။ မနေပါနဲ့ Minspy သည် root သို့မဟုတ် jailbreak မပါဘဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသောနောက်ဆုံးပေါ် app တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာမခံချက်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကို malware များထိခိုက်လွယ်စေရန်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာနှင့်သင်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်သည်မည်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ Minspy ၏အစွမ်းထက်သောအင်္ဂါရပ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ app ကသင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုမျက်စိမှိတ်။ လုံခြုံစိတ်ချစေရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာသို့မဟုတ်သင်သိသောတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင့်အားနောက်ကျောတွင်ထိုးနှက်ခြင်းမရှိစေရန်အကောင်းဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့၏စာသားများ၊ iMessages နှင့်လူမှုမီဒီယာပြောဆိုမှုများကိုရယူပါ။ သူတို့၏ကုန်သွယ်မီဒီယာဖိုင်များကိုလည်းကြည့်ပါ။
အဝင်နှင့်အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများအားလုံးကိုဂရုပြုပါ။ timestamps, ခေါ်ဆိုမှုကြာချိန်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုအကြိမ်ရေများကဲ့သို့အသေးစိတ်များကိုကြည့်ပါ။
virtual မြေပုံပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်ထားသောဇုန်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ။ target device သည်ဇုန်သို့ကူးပြောင်းသောအခါသတိပေးချက်များကိုရယူပါ။
ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိဘဲခြေရာခံ။ Minspy ကို install လုပ်ပြီးအသုံးပြုပါ။
ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုကိုအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်စောင့်ကြည့်ပါ
Minspy အကောင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ။ သင်၏အီးမေးလ် ID ကိုအသုံးပြုသူအမည်အဖြစ်သုံးပါ။
သင့်ထံအီးမေးလ်ပို့သည့် setup ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။
သငျသညျစောင့်ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ! သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှ Minspy ထိန်းချုပ်နေရာကိုဝင်ရောက်ပါ။
"နောက်ဆုံးတော့ငါ့သမီး၏ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုငါထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သူကအိပ်ချိန်အတွင်းမှာစကားပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် Minspy Cell Phone Tracker ကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ Minspy သည်မိဘများအတွက်အလွန်ကောင်းသည့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်"
အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည် 4.44/5 ပေါ်အခြေခံကာ 2788 သုံးသပ်ချက်များ။
"ကျွန်တော့်သားကို ၈ နှစ်သာဖုန်းမဝယ်ချင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဖိအားပေးမှုကိုခံခဲ့ရတယ်။ ငါသုတေသနလုပ်ပြီးနောက်ဆုံး Minspy Cell Phone Tracker အကြောင်းသိလာတယ်။ သူ့ကိုဖုန်းမချမီ app ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ အခုသူဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါအမြဲသိနေတယ်။"
"ဤဆဲလ်ဖုန်း tracker အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းများအားကိုင်တွယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးအပေါ်သူတို့၏သစ္စာရှိမှုကိုအလျှော့ပေးသည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်သူတို့ပါဝင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သိသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး နှင့်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နေသူကိုကျွန်ုပ်တို့ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။"
- Tyler Smith, ဗြိတိန်
အဘယ်ကြောင့် Minspy ကိုရွေးချယ်ပါ?
သုံးစွဲသူများ၏ ၉၆% သည်သက်တမ်းတိုးသည်
သင် Minspy ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်
190+ အတွက်တစ် ဦး ကလူ ဦး ရေ
လူအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအသုံးပြုပါ။
ငါ့သား၏ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
10 iPhone အတွက်အကောင်းဆုံး Keylogger
အကောင်းဆုံး iPhone သူလျှို, Android Spy Apps အိမ်ထောင်ဖက်ကိုလိမ်လည်ခြင်း, အကောင်းဆုံးသူလျှို Apps များ, လက်ကိုင်ဖုန်းတလုံးကိုမလိုအပ်ပဲသူလျှိုလုပ်နည်း, အကောင်းဆုံး WhatsApp သူလျှို, လိမ်လည်လှည့်ခင်ပွန်းဖမ်း, ရည်းစားအပေါ်သူလျှို, အကောင်းဆုံး Android Keylogger, ငါ့ဇနီးသူလျှို, သူတို့ကိုမသိဘဲဆဲလ်ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်, ခင်ပွန်းအပေါ်သူလျှို, iPhone ကိုဘယ်လို Hack မလဲ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို Hack, Password မပါပဲတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Instagram ကိုဘယ်လို Hack မလဲ, WhatsApp ကိုဖုန်းမသုံးပဲနဲ့ Hack ပါ
Minspy Android Installation လမ်းညွှန်
Minspy iOS Setup လမ်းညွှန်
SOFTWARE သည်တရားဝင်အသုံးပြုမှုအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ လိုင်စင်ရဆော့ဗ်ဝဲကဲ့သို့သောစောင့်ကြည့်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုတပ်ဆင်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်သင်၏ဒေသတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်သင်စောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဥပဒေအရယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုစောင့်ကြည့်နေကြောင်းစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူ / ပိုင်ရှင်များအားအသိပေးရန်သင်လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအားပြင်းထန်သောငွေကြေးနှင့်ရာဇ ၀ တ်ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်သည်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုလိုင်စင်ရထားသောဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးနှင့်ဆွေးနွေးသင့်သည်။ သင်သည်သင်၏လိုင်စင်ရဆော့ဖ်ဝဲကိုတပ်ဆင်ထားသည့်ကိရိယာကိုစောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တွင်တာ ၀ န်အပြည့်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူသည်အသုံးပြုသူမှစောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်မရှိသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်ရန်ရွေးချယ်ပါက Minspy သည်တာဝန်မရှိပါ။ Minspy သည်လိုင်စင်ရဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များလည်းမပေးနိုင်ပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Minspy ။ အားလုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် OKAY (OK) ကိုနှိပ်ပါ။ COOKIE မူဝါဒ ဖတ်ပါ။ သင်၏ cookie ချိန်ညှိချက်များကိုသင်၏ဘရောင်ဇာမှပြောင်းလဲနိုင်သည်။